Linux Mint 17.3 "Pink" yakabuda zviri pamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint 17.3 «Pink», yakabuda zviri pamutemo
Iyo yazvino vhezheni yeLinux Mint yakabuda zviri pamutemo. Tinogona ikozvino kurodhaunirodha zviri pamutemo pawebhu, iyo isingacharatidze matambudziko kana kupaza
Mushure memwedzi yakati wandei yekuvandudza uye mamwe betaLinux Mint 17.3 inowanikwa zviri pamutemo kurodha pasi uye kumisikidza. Sezvatove takataura kare kare, Rosa izita nekuti Linux Mint iri zvakanaka, zvakanaka uye zvipfupi.
Ini ndinotaura zviri pamutemo nekuti Linux yaifanira kunge iri kunze mazuva mashoma apfuura, zvisinei, iyo yepamutemo Linux Mint peji Ini ndanga ndave nedambudziko rehunyanzvi uye yaisakwanisa kurodhauniwa kubva kune yepamutemo saiti (yaiwanikwa kubva kune mamwe emahofisi saiti anga atora pasi uye kuisimudza zvakare). Nekudaro, ivo vakatokumbira ruregerero nezve kunonoka uku uye vakaburitsa zviri pamutemo kurodha pasi.
Chii Chitsva uye Zvimiro muLinux Mint 17.3 "Pink"
Linux kernel 3.19.
Ichiri chakavakirwa pa Ubuntu 14.04 LTS(ichave yekupedzisira vhezheni yekuzviita).
Cinnamon 2.8 nezvose zvayo zvitsva maficha, kusanganisira mhere mitsva, yakavandudzwa manejimendi manejimendi uye nekuvandudza masisitimu ehurongwa pakati pevamwe.
Mateo 1.12 nenhau dzayo dzese uye maficha.
Kuvandudza mune software repositories.
Kugadziridza kune inosanganisirwa software
Kugadziriswa kwepamuviri uye kugadzirisa mashandiro.
Sezvauchaona, shanduko dzekuparadzirwa uku zvine chekuita ne Linux Mint 17.2 ivo vadiki. Izvi zvinodaro nekuti Linux Mint yakavakirwa pane yazvino Ubuntu LTS kugovera, saka kudzamara vaburitsa itsva LTS shanduko dzinogara dziri diki. Nezveramangwana 18 version, kuchave nekuchinja kukuru nekuti Ubuntu iri kuzoburitsa itsva LTS in 2016.
Kune vasina kuziva avo vachiri vasingazive Linux Mint 17.3, ndikuudzei kuti iko kugovera kudiki asi izvo iri kurova zvakaomarara muLinux nyika. Iko kusununguka kwekushandisa, kukwezva kwayo uye kwayo kwakanaka kuita kuti ive imwe yeanofarira kugoverwa nevashandisi kutenderera pasirese.
Kuti utore pasi, tichaenda ku Linux Mint yepamutemo peji, kupi senguva dzose, unogona kusarudza pakati peshanduro neCinnamon uye shanduro neMate
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Linux Mint 17.3 «Pink», yakabuda zviri pamutemo
Ini ndangoedza uye hazvishande parizvino, unogona kuikanda kubva kuna softpedia.com
Ini ndichiri kuiwana yakanakisa distro kukurudzira kune avo vanovhura mu linux. Wagadzirira kuenda uye nyore kuchinja kune avo vanobva kuhwina ...
Omar anotenderera akadaro
Pane mumwe munhu akatovandudzwa kuburikidza nemintupdate?
Pindura kuna Omar Flores
Iyo Macbook Air inoshanda zvirinani neLinux
Vanhu vazhinji vanofunga kushora Microsoft yeWindows 10